သင်ဂရုစိုက်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြသနိုင်မည့် အသုံးအနှုန်းများ - Myanmar Network
သင်ဂရုစိုက်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြသနိုင်မည့် အသုံးအနှုန်းများ
Posted by Soe Soe Win on May 11, 2015 at 11:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘ၀တွင် ပြီးပြည့်စုံသော စကားလုံးလေးများက အရာရာကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည့် ထူးခြားသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပြည့်နှက်နေပါသည်။ အချို့အခြေအနေများသည် အလွန်ပင် သိမ်မွေ့လွန်းသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်လေ့ရှိပြီး ထိုအခြေအနေများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်သိမ့်မှုနှင့် စာနာမှုပေးနိုင်သော စကားလုံးများကို ရှာဖွေရလေ့ရှိပါသည်။ အခြားကိစ္စရပ်များကတော့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးပါသည့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရသည့် အချိန်ကာလများဖြစ်ပါသည်။ ဘ၀ရဲ့ ထူးခြားပြီးလေးနက်သည့် အခြေအနေများများအတွက် အသုံးဝင်သည့် ခံစားချက်များကို ဖော်ပြသည့် ၀ါကျများကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
အကယ်၍များ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်က ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းငြိ၍ လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပါက ထိုကိစ္စသည် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မင်္ဂလာဆောင်ပဲသွားသွား (သို့မဟုတ်) စာရေး၍ပဲ ဂုဏ်ပြုပြု “I wish you the best of happiness in the years to come” (နောက်လာမည့်နှစ်များတွင် ပျော်ရွှင်စရာများဖြင့် ပြည့်နှက်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်) ဟု ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
များသောအားဖြင့်တော့ ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာ သာမန် “Happy Birthday” (ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ) ဆိုတာနှင့်ပင် လုံလောက်နေပါပြီ။ မွေးနေ့ရှင်ကို သူတို့မှာ မွေးနေ့ပွဲကို ထူးထူးခြားခြား ကျင်းပဖို့အစီအစဉ် ရှိလား ဟု မေးလေ့မေးထလည်း ရှိပါသည်။ “Are you doing anything special to celebrate?” (မွေးနေ့ပွဲကို တခုခု ထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြီး ကျင်းပဖို့ရှိလား?) မှတ်သားဖို့ကတော့ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမှာ သင်က သင့်ရဲ့မွေးနေ့ရှင်သူငယ်ချင်းကို သူတို့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အပြင်ထွက်ပြီး သင်က ညစာကျွေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပျော်ဖို့ တစ်ခုခုလုပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ သူတို့က သင့်ကို လုပ်ပေးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အတူပဲ အသက်မေးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ တစ်ချို့သောသူများက ထိုသို့မေးမြန်ခြင်းကို ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ပျော်ရွှင်နေသည့် မိဘများကို “Congratulations” (ဂုဏ်ယူပါတယ်) ဟု ပြောလိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ကလေး၏ လိင်ကို မသိသေးပါက ထပ်မံ၍ “Is itaboy oragirl?” (ကလေးက ယောက်ျားလေးလား မိန်းကလေးလား) ဟု မေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ကို ဓါတ်ပုံပြထားပါက “She’s adorable!” (သူမက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ) ၊ “He’s so cute!” (သူက ချစ်စရာလေး) (သို့မဟုတ်) “She takes after her mother!” (သူမက အမေနဲ့ တူတယ်နော်) လို့ ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့။
အကယ်၍ သင်သည် နေမကောင်းဖြစ်နေသည်ဟု ခံစားရပါက တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ရင်ထဲမှ စိတ်ရင်းအတိုင်းမေးလာသည့် “How are you feeling?” (ဘယ်လိုနေသေးလဲ) ဆိုတဲ့မေးခွန်း ကို ကြားလိုက်ရခြင်းသည် လွန်စွာမှ သာယာလှသည်။ “Take care of yourself” (ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဦး) “Get well soon” (နေမြန်မြန်ကောင်းပါစေ) သို့မဟုတ် “I hope you feel better soon!” (မကြာမီ သက်သာပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်) အစရှိသည့် အသုံးအနှုန်းများသည် သာမန်ဖျားနာခြင်းများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ အကယ်၍ အခြေအနေသည် ပြင်းထန်သည့် အခြေအနေဆိုပါက “My thoughts and prayers are with you” (ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခင်ဗျားဟာ အမြဲရှိနေပြီး ခင်ဗျားအတွက် ဆုတောင်းပေးနေမှာပါ။) ဟု ပြောဆိုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်အသိ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ ချစ်ခင်ရသည့်သူ တစ်ဦးဦးကို ဆုံးရှုံးရသည်ကို ခံစားရသည့်အခါ သူတို့သည် အမှန်ပင် စိတ်နှလုံးပူဆွေးခြင်းများစွာကို ခံစားနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ထိခိုက်လွယ်သည့် အခြေအနေများတွင် သူတို့ကို “I’m sorry to hear about the loss of your loved one (father/mother/brother, etc.)” (ခင်ဗျားချစ်ရတဲ့ (အဖေ၊ အမေ၊ ညီအကို စသည်) ကို ဆုံးရှုံးရတာကို ကြားသိရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး) ဟုပြောကြားခြင်းသည် သင့်တော်ပါသည်။ ထို့အပြင် “If there is anything I can do for you, let me know.” (ခင်ဗျားအတွက် ကျွန်တော် တစ်ခုခု လုပ်ပေးနိုင်တာရှိမယ်ဆိုရင် ပြောပါနော်) ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားနိုင်ပါသည်။
Englishtown.com မှ English to show you care ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀တှငျ ပွီးပွညျ့စုံသော စကားလုံးလေးမြားက အရာရာကို ပွောငျးလဲသှားစနေိုငျသညျ့ ထူးခွားသညျ့ ဖွဈရပျမြားနှငျ့ ပွညျ့နှကျနပေါသညျ။ အခြို့အခွအေနမြေားသညျ အလှနျပငျ သိမျမှလှေ့နျးသညျ့ အခွအေနမြေိုးဖွဈလရှေိ့ပွီး ထိုအခွအေနမြေားအတှကျ ကြှနျုပျတို့သညျ နှဈသိမျ့မှုနှငျ့ စာနာမှုပေးနိုငျသော စကားလုံးမြားကို ရှာဖှရေလရှေိ့ပါသညျ။ အခွားကိစ်စရပျမြားကတော့ ကြှနျုပျတို့အတှကျ အရေးပါသညျ့ တဈစုံတဈယောကျကို ခြီးကြူးဂုဏျပွုရသညျ့ အခြိနျကာလမြားဖွဈပါသညျ။ ဘ၀ရဲ့ ထူးခွားပွီးလေးနကျသညျ့ အခွအေနမြေားမြားအတှကျ အသုံးဝငျသညျ့ ခံစားခကျြမြားကို ဖျောပွသညျ့ ဝါကမြားကို စုစညျးတငျပွလိုကျရပါသညျ။
အကယျ၍မြား သူငယျခငျြး ၂ ယောကျက ကွိုးခငျြးထား ကွိုးခငျြးငွိ၍ လကျထပျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီဆိုပါက ထိုကိစ်စသညျ ပြျောရှငျကွညျနူးဖှယျကောငျးသညျ့ ကိစ်စရပျတဈခုပငျဖွဈသညျ။ သငျသညျ မင်ျဂလာဆောငျပဲသှားသှား (သို့မဟုတျ) စာရေး၍ပဲ ဂုဏျပွုပွု “I wish you the best of happiness in the years to come” (နောကျလာမညျ့နှဈမြားတှငျ ပြျောရှငျစရာမြားဖွငျ့ ပွညျ့နှကျစဖေို့ ဆုတောငျးပေးပါသညျ) ဟု ဖျောပွနိုငျပါသညျ။
မြားသောအားဖွငျ့တော့ ဒီလိုပှဲမြိုးတှမှော သာမနျ “Happy Birthday” (ပြျောရှငျဖှယျမှေးနဖွေ့ဈပါစေ) ဆိုတာနှငျ့ပငျ လုံလောကျနပေါပွီ။ မှေးနရှေ့ငျကို သူတို့မှာ မှေးနပှေဲ့ကို ထူးထူးခွားခွား ကငျြးပဖို့အစီအစဉျ ရှိလား ဟု မေးလမေ့ေးထလညျး ရှိပါသညျ။ “Are you doing anything special to celebrate?” (မှေးနပှေဲ့ကို တခုခု ထူးထူးခွားခွားလုပျပွီး ကငျြးပဖို့ရှိလား?) မှတျသားဖို့ကတော့ အနောကျတိုငျးယဉျကြေးမှုမှာ သငျက သငျ့ရဲ့မှေးနရှေ့ငျသူငယျခငျြးကို သူတို့ရဲ့မှေးနမှေ့ာ အပွငျထှကျပွီး သငျက ညစာကြှေးခွငျး (သို့မဟုတျ) ပြျောဖို့ တဈခုခုလုပျခွငျးကို ပွုလုပျပေးရမှာပါ။ သူတို့က သငျ့ကို လုပျပေးရမှာ မဟုတျပါဘူး။ ထို့အတူပဲ အသကျမေးခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။ တဈခြို့သောသူမြားက ထိုသို့မေးမွနျခွငျးကို ရိုငျးစိုငျးတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။
ပြျောရှငျနသေညျ့ မိဘမြားကို “Congratulations” (ဂုဏျယူပါတယျ) ဟု ပွောလိုကျပါ။ အကယျ၍ သငျသညျ ကလေး၏ လိငျကို မသိသေးပါက ထပျမံ၍ “Is itaboy oragirl?” (ကလေးက ယောကျြားလေးလား မိနျးကလေးလား) ဟု မေးနိုငျပါသညျ။ အကယျ၍ သငျ့ကို ဓါတျပုံပွထားပါက “She’s adorable!” (သူမက ခဈြဖို့ကောငျးလိုကျတာ) ၊ “He’s so cute!” (သူက ခဈြစရာလေး) (သို့မဟုတျ) “She takes after her mother!” (သူမက အမနေဲ့ တူတယျနျော) လို့ ပွောဖို့မမပေ့ါနဲ့။
အကယျ၍ သငျသညျ နမေကောငျးဖွဈနသေညျဟု ခံစားရပါက တဈစုံတဈယောကျ၏ ရငျထဲမှ စိတျရငျးအတိုငျးမေးလာသညျ့ “How are you feeling?” (ဘယျလိုနသေေးလဲ) ဆိုတဲ့မေးခှနျး ကို ကွားလိုကျရခွငျးသညျ လှနျစှာမှ သာယာလှသညျ။ “Take care of yourself” (ကိုယျ့ကိုယျကို ဂရုစိုကျဦး) “Get well soon” (နမွေနျမွနျကောငျးပါစေ) သို့မဟုတျ “I hope you feel better soon!” (မကွာမီ သကျသာပါစလေို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ) အစရှိသညျ့ အသုံးအနှုနျးမြားသညျ သာမနျဖြားနာခွငျးမြားအတှကျ သငျ့တျောပါသညျ။ အကယျ၍ အခွအေနသေညျ ပွငျးထနျသညျ့ အခွအေနဆေိုပါက “My thoughts and prayers are with you” (ကြှနျတေျာ့ရဲ့ စိတျထဲမှာ ခငျဗြားဟာ အမွဲရှိနပွေီး ခငျဗြားအတှကျ ဆုတောငျးပေးနမှောပါ။) ဟု ပွောဆိုနိုငျသညျ။
အကယျ၍ သငျ့အသိ တဈစုံတဈယောကျက သူတို့ ခဈြခငျရသညျ့သူ တဈဦးဦးကို ဆုံးရှုံးရသညျကို ခံစားရသညျ့အခါ သူတို့သညျ အမှနျပငျ စိတျနှလုံးပူဆှေးခွငျးမြားစှာကို ခံစားနရေမညျဖွဈသညျ။ ဤကဲ့သို့ ထိခိုကျလှယျသညျ့ အခွအေနမြေားတှငျ သူတို့ကို “I’m sorry to hear about the loss of your loved one (father/mother/brother, etc.)” (ခငျဗြားခဈြရတဲ့ (အဖေ၊ အမေ၊ ညီအကို စသညျ) ကို ဆုံးရှုံးရတာကို ကွားသိရတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးပါဘူး) ဟုပွောကွားခွငျးသညျ သငျ့တျောပါသညျ။ ထို့အပွငျ “If there is anything I can do for you, let me know.” (ခငျဗြားအတှကျ ကြှနျတျော တဈခုခု လုပျပေးနိုငျတာရှိမယျဆိုရငျ ပွောပါနျော) ဟု ထပျလောငျးပွောကွားနိုငျပါသညျ။
Englishtown.com မှ English to show you care ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
English Conversation Lesson (Small Talk - အလ္ဘာပသလ္ဘာပ ပြောခြင်း)
အင်္ဂလိပ်စာ အမှားများ (English Errors)
Permalink Reply by San Lwin on September 9, 2015 at 21:43